वित्तीय साक्षरता – Page3– Banking Khabar
थोरै काम, धेरै पैसा : अरुको पैसामा व्यापार
रविन्द्र भट्टराई । एक विद्घानले भनेका छन्— ‘व्यापार भनेको अरुको पैसा हो ।’ हो, आफ्नोमात्र पैसाले व्यवसायमा तीव्र वृद्घि सम्भव छैन । आज दुनियाँको विकास ऋणबाटै भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना ऋणबाटै चलेका छन् । यसैका लागि त बैंक खुलका …
रक्सी र सेयर बजार
रविन्द्र भट्टराई । रक्सी र सेयर बजारको सम्बन्ध निकै रोचक छ । सेयर बजार भनेको भीड हो । भीडको मनोविज्ञान हो । यसैअनुसार बजार चल्छ । यो अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । भीडको पात्रले रक्सी पिएर देखाउने व्यवहारसँग सेयर बजारको …
बैंकिङ क्षेत्रमा KYC को महत्व
बैंकिङ खबर । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो ग्राहकको पहिचान थाहा पाउने प्रक्रियालाई केवाईसी(KYC) अर्थात नो योर कस्टुमर(Know your costumer) भनिन्छ । अझ प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा, व्यक्तिगत विवरणका साथमा पारिवारिक विवरण एवम् व्यवसायिक विवरण समेत प्रष्ट रुपमा खुल्ने समग्र विवरणलाई केवाईसी …
स्प्रेड रेट के हो ? किन छ, यसको आवश्यकता र महत्व ?
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने व्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने व्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड रेट हो । उदाहरणका लागि, कुनै एउटा बैंकले निक्षेपबाट औसतमा तीन प्रतिशत व्याज दियो र लगानीबाट औसतमा पाँच प्रतिशत …
वित्तीय अपराधको एउटा रुप ‘बैंकिङ फिसिङ’ : कसरी रहने सुरक्षित ?
बैंकिङ खबर । तपाईको इमेलमा कहिलेकाँही विभिन्न प्रलोभनसहित लिंकहरु पठाइएको हुनसक्छ । त्यहाँ तपाईले कुनै बम्पर पुरस्कार पाउनुहुने भएको, लक्की ड्रमा नाम परेको वा कुनै देशको भिसा लागेको भनि इमेलसहित लिंक पठाइएको हुन्छ । कहिलेकाँही तपाईलाई अज्ञात नम्बरबाट मेसेज पनि …
व्याजदर निर्धारणमा आधार दर : किन जरुरी छ सन्तुलन ?
नारायणलाल श्रेष्ठ । बैकिङ्ग प्रोफेसनमा व्याजदर नौलो विषय होइन । मूलभुत रुपमा बैंकको काम नै व्याज तिरेर निक्षेप तथा सापटीको रुपमा रकम संकलन गर्ने र व्याज लिएर ऋण दिने हो । जसको लागि बैंकले लिने र दिने व्याजदर तोकेको हुन्छ र …
सहकारी र माइक्रोफाइनान्स बीच के फरक छ ? अत्यावश्यकीय जानकारी
रेखा चन्द । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबारे सर्वसाधारणको बुझाई एउटै रहेको भए पनि यी दुई क्षेत्र फरक फरक हुन् । माइक्रोफाइनान्स बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको एउटा भाग हो । माइक्रोफाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गको इजाजत दिनुका साथै नियमन, निर्देशन पनि …
रिपो र रिभर्स रिपो के हो ? किन जारी गरिन्छ ?
रिपो : बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण “रिपो” हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ने.रा.बैंकमा रहेको …
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्ने कार्यहरु (आठ बुँदामा)
रेखा चन्द । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सरकारी ऋणपत्र तथा संस्थागत धितोपत्रहरुलाई तरलता प्रदान गर्नुका साथै सो को निर्वाध खरिद बिक्रि सुविधा प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त हालसम्म एक मात्र धितोपत्रको दोस्रो बजार नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो । …
सबैका लागि बैंकिङ शिक्षा : १० बुँदामा
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ जागीरमा आकर्षण बढिरहेको छ । फलस्वरुप, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । यसले बैंकिङ जागीरमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ । त्यसमाथि सर्टि्फिकेटकै भरमा बैंकमा जागीर पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरुको सोचाईका कारण उनीहरु बेरोजगार नै …
खराब कर्जा के हो ? कसरी पुग्छ बैंकलाई हानी ?
मुद्धति बचत किन गर्ने ? हेर्नुस् मुद्धति बचतका फाइदाहरु
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणहरुद्धारा बचत गरिएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गर्दछन् । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको रकम निक्षेप हो । निक्षेप चार किसिमका हुन्छन्, सेभिङ डिपोजिट, रिकरिङ डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट र फिक्स डिपोजिट । फिक्स डिपोजिट …
वित्तीय व्यबस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने नौ टिप्सहरु
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु …
अत्यावश्यक बैंकिङ जानकारी (५७ बुँदामा)
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ जागीरमा आकर्षण बढिरहेको छ । फलस्वरुप, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । यसले बैंकिङ जागीरमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ । त्यसमाथि सर्टि्फिकेटकै भरमा बैंकमा जागीर पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरुको सोचाईका कारण उनीहरु बेरोजगार …